Search Term: မြို့များ-မြန်မာနိုင်ငံ , 8,107 results have been searched, Search time: 0.064 seconds , Sorting Option: Match level Published Date Subject Title Author Call No. Borrowed Times Renewal Times Volume No. Sort by: Desc Asc Hide Navigation | Hide trend diagram
မြို့များ-မြန်မာနိုင်ငံ မြို့များ- မြန်မာနိုင်ငံ မြို့မများ - မြန်မာနိုင်ငံ ၂။မြို့များ- မြန်မာနိုင်ငံ မြွေများ-မြန်မာနိုင်ငံ မိဖုရားများ-မြန်မာနိုင်ငံ မြို့ဟောင်းများ-မြန်မာနိုင်ငံ ဘုရားများ-မြန်မာနိုင်ငံ ငှက်များ-မြန်မာနိုင်ငံ ဆင်များ-မြန်မာနိုင်ငံ
NL Yangon (6059)
မြန်မာနိုင်ငံ- သမိုင်း (168)
မြန်မာနိုင်ငံ - သမိုင်း (157)
မြန်မာနိုင်ငံ- နိုင်ငံရေးနှင့်အစိုးရ (100)
ကလေးစာပေ; မြန်မာရုပ်ပြ ; ကာတွန်းနှင့်ကယ်ရေကယ်ချာ (48)
မြန်မာနိုင်ငံ - နိုင်ငံရေးနှင့်အစိုးရ (45)
မြန်မာနိုင်ငံ - နိုင်ငံရေးနှင့်အစိုးရ (39)
မင်းဇော်၊ ကာတွန်း (33)
သာချို၊ မောင် (27)
Total 811 pages First Page <Prev 1234567 8910 Next > Last Page>>
Author: ခိုင်၊ ကို၊ ပဉ္စလက်-
Publisher: ဧပြီဦးစာပေ Published Date: 2018
Literature Type: Books , Call No.: ၅၉၇.၉၆ ခိုင် ၂၀၁၈/၃၃၉
မြန်မာ ၂၀၅၀ အနာဂတ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား Ordering
Publisher: နှစ်ကာလများစာပေ Published Date: 2020
Publisher: တောရိုင်းနှင်းဆီစာပေ Published Date: 2019
Literature Type: Books , Call No.: ၃၂၀.၉၅၉၁ တင် ၂၀၁၉/၃၈၈
Publisher: မုံရွေးစာပေ Published Date: 2019
Literature Type: Books , Call No.: ၃၂၀.၉၅၉၁ ဘယ် ၂၀၁၉/၅၅၇
လူငယ်နှင့်နိုင်ငံရေး နိုင်ငံရေးနှင့်လူငယ် Ordering
Publisher: ရွှေဇွဲမာန်စာပေတိုက် Published Date: 2018
Literature Type: Books , Call No.: ၃၂၀.၉၅၉၁ သန်း ၂၀၁၈/၁၃၉၅
၁၉၆၂ ခုနှစ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာသိမ်းယူသောကယားဦးစိန်၏မှတ်တမ်းများ Ordering
Author: စိန်၊ ဦး၊ ကယား - (မဟာသရေစည်သူ)
Publisher: နေရီရီစာအုပ်တိုက် Published Date: 2018
Literature Type: Books , Call No.: ၃၂၀.၉၅၉၁ စိန် ၂၀၁၈/၄၁၉၇
Publisher: တိုးမြစ်စာအုပ်တိုက် Published Date: 2018
Literature Type: Books , Call No.: ၃၂၀.၉၅၉၁ တာ ၂၀၁၈/၄၀၅၅
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့်တပ်မတော်(အပိုင်း-၁): Myanmar Politics and the Tatmadaw Part-1 Ordering
Publisher: မြဝတီစာပေတိုက် Published Date: 2018
Author: စန်းမြင့်၊ရဲဘော် အောင်သူ၊ရဲဘော်
Literature Type: Books , Call No.: ၃၂၀.၉၅၉၁ ဘ ၂၀၁၇/၁၈၃၄
Publisher: ဓမ္မသံတော်ဆင့်စာပေတိုက် Published Date: 2017
Literature Type: Books , Call No.: ၃၂၀.၉၅၉၁ မိုး ၂၀၁၇/၁၈၁၅